शिक्षा / विज्ञान /प्रविधि Archives - Nepal Niti
राधा पाण्डे कपिलवस्तु, असोज २ (नेपालनीति)। इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै गरेका कपिलवस्तुका एक युवाले नेपालमै पहिलोपटक ‘थ्रिडी आर्किटेक डिजाइन’मा ‘थ्रिडी सिनेमा’को जस्तै प्रयोग गरेका छन् । लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेज रुपन्देहीमा बी.ई. (सिभिल इन्जिनियर)मा अध्यनरत विजय बेल्बासेले यस्तो प्रकृतिको अवधारणा नेपालमा पहिलो पटक ल्याएका हुन् । बेल्बासेका अनुसार प्रोजेक्टरको माध्यमबाट थ्रिडी डिजाईनमा...
काठमाडौं, भदौ २८ (नेपालनीति) । सरकारले बिरामी बोक्ने बाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाएमा एम्बुलेन्सको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी एम्बुलेन्स बिरामी बोक्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाएमा तुरुन्त दर्ता खारेज गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दुरुपयोग...
काठमाण्डौ, भदौ २३ (नेपालनीति) । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को बारेमा भ्रम फैलाउने विरुद्ध कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल लगायतमा कोरोना भाइरस केही होइन र यो भाइरस जानी जानी उत्पति गराइएको भन्दै भ्रम छर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो...
कोरोनाको कहर: बर्तमान अबस्था र अबको बाटो
मानव जाती नै अहिले असाधारण सकटमा परिरहेको छ। यो सकटको सामना गर्न बिश्वका बैज्ञानिकहरुले आफ्नो पुर्ण सामर्थ लगाइरहेका छ्न ।कोरोनाको कहरबाट बाहिर निस्कन बिश्वका शक्तिशाली रास्ट्रहरुलाई पनि हाम्मे हाम्मे परेको छ। एउटा यस्तो भाइरस जुन आँखाले पनि देख्न सकिँदैन त्यस्तो सूक्ष्म जीवाणुले अहिलेको बिश्वमा नै त्रास फैलाएको छ। चीनको हुवेइ...
“कोरोना बिरुद्ध विश्वको सङ्घर्ष”
आज विश्व रोकिएको छ। क्षणभर रोकिदा अनि आलिकती ढिलो हुदा पनि सर्बस गुमेको महसुस हुने मानिस हरु आज बन्द कोठामै कैदी जस्तै गरि बस्न वाध्य भएका छ्न । कलकारखाना उद्योग धन्दा , यतायात , शिक्षालय सबै बन्द छ्न। मानिसहरु एक आपसमा सामिप्यता र बिचार राख्न पनि पाएका छैन्न यस को ...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा अनुकूल समयमा लिने गरी माथिल्लो तहका कक्षा सुरु गर्ने तयारी
काठमाडौं, साउन २७ (नेपालनीति) । सरकारले लकडाउन हटाएपछि कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा अनुकूल समयमा लिने गरी माथिल्लो तहका कक्षा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि भदौ पहिलो सातादेखि लिने गरी परीक्षाहरू स्थगित भएका थिए । तर, संक्रमण बढ्दै गएकाले स्थिति सहज भएपछि मात्र ती परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी...
विद्यालय खोल्ने मापदण्ड !!
काठमाडौं, साउन १५ (नेपालनीति) । सरकारले भदौ १ गतेबाट विद्यालयल भर्ना गर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभावित भएको शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम भदौ १ गतेबाट सुरु हुने भएको हो । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमसँगै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्‍चालनका लागि प्रोटोकल...
काठमाडौं, असार २५ (नेपालनीति) । लकडाउनपछि घटेको विद्युत खपतको दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । लकडाउनपछि उद्योग, कलकारखाना र ब्यापाररव्यवसाय बन्द भएपछि विजुलीको खपत आधाले घटेको थियो । घराययी ग्राहकले मात्रै उपभोग गर्ने अवस्था रहेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौंको सम्भावित नाफा गुमाउनुपरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार...
पुस्प राज दाहाल : कोभिड–१९ हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको छ । कोरोना भाइरसबाट लाग्ने यस कोभिड–१९ रोगको औषधि आजसम्म पनि पत्ता लगेको छैन । हुन त यो कोरोना नयाँ भाइरस त होइन, वैज्ञानिकहरूले सन् १९६० मै यसको पहिचान गरिसकेका थिए । यसका विभिन्न ६ प्रजाति पहिचान भइसकेका छन् ।...